ICottonwood Cottage. Umtsalane wendlu yasefama kunye nentuthuzelo
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguMcKoy
Yonwabela i-rustic charm yeCottonwood Cottage. Le ndlu inamagumbi okulala ama-3 efama yokuhlambela ilala i-10 enezixhobo zale mihla kunye nelizwe elitofotofo. Zicwilise kwibhafu enkulu ezimele yodwa kwibhafu enkulu ephezulu. Relax ngeendawo ezininzi zokuhlala phambi kwescreen esikhulu seTV okanye utye kunye nesidlo esisuka ekhitshini elinefanitshala. Ungajongeka ngcono ngewasha kunye nesomisi. Hlala upholile ngexesha lasehlotyeni kunye ne-air conditioning ephakathi.
ICottonwood Cottage yindlu enamabali ama-2 efama. Ikhitshi kunye negumbi lokutyela likufuphi negumbi lokuhlala elibanzi elinombhobho otofotofo kunye nezihlalo ezitofotofo. Kukho amagumbi okulala ama-2 kunye nebhafu kumgangatho omkhulu. Umgangatho ophezulu unegumbi lokulala eliphambili kunye negumbi lokuhlambela elikhulu elahlukileyo kunye nebhafu yokuzimela yodwa. (Nceda uqaphele ukuba izinyuko ukuya kwinqanaba lesibini zithe nkqo). Sinobubele kwizilwanyana zasekhaya kodwa sicela ukuba uhlawule umrhumo we-50 yeedola ngokuhlala. Nceda ungavumeli izilwanyana kwiibhedi.
ICottonwood Cottage ibekwe kufutshane neJoe's Valley Reservoir kunye neCottonwood Canyon, entliziyweni yeCastle Dale kwimizuzu nje embalwa ukusuka kwiipaki, idisc yegalufa, amabala e-rodeo, iinkundla zebhola ekhatywayo, ipaki yokutyibiliza kunye neziko lasemanzini elinamachibi angaphakathi nangaphandle. Yonwabela amachibi akufutshane, iintaba, iSan Rafael Swell kunye nentlango. Thatha umjikelo wegalufa kwi-18 hole ye-Millsite Golf Course kwaye ujabulele iimbono ezikhuthazayo.
Umbuki zindwendwe ngu- McKoy
Siya kufumaneka ngemiyalezo ebhaliweyo, iminxeba okanye ngokobuqu ukuphendula nayiphi na imibuzo kwaye sikuncede ube nokuhlala okumnandi.